उद्धव भरालीः जसले १४० भन्दा बढी जीवनाेपयाेगी आविष्कारहरु गरिसके
एउटा मान्छेले जीवनमा के के गर्ने सक्छ ? वा कति नयाँ आविष्कार गर्न सक्छ ? धेरैमा ५, १० ! तर भारतका उद्धव भरालीले १४० भन्दा बढी आविष्कारहरु गरेका छन्।
उनलाई भारतभरि नै कृषि संबन्धी आविष्कारकालागि मानिसहरु चिन्दछन्। उनका धेरैजसो आविष्कारहरु कम लागतमा तयार गरिएका छन् र तिनमा स्थानीयस्तरमै पाइने सामग्रीहरु प्रयोग गरिन्छ।
उनले गरेका आविष्कार हरुका हरियो चियाको पत्ति प्रशोधन गर्ने मेसिन, धान रोप्ने सम्यन्त्र, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान मिल्ने शौचालय, अन्य कैयौं रहेका छन् ।
उनले भनेका छन् ,” यो मेरो रुची हो, मेरो व्यवसाय पनि होे । म समस्या समाधान गर्न रुचाउँछु, खासगरि त्यस्तो समस्या जसले सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको हुन्छ । ” उनले उसको आविष्कारका लागि कैयौं पुरस्कार पनि जितेका छन् ।
यति बेला उनी शारिरक रुपले अशक्त अथवा भनौं फरक क्षमता भएका व्यत्तिहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
केहि समय अगाडि भारतका एक पन्द्र वर्षीया शारीरिक रुपले अशक्त्त रहेका राज रहमानका अभिभावक उनका लागि केहि गरिदिन भनि आग्रह गर्दै उद्धव भए ठाउँ गएका थिए ।
राज जन्मँदै उनका शरीरका केहि अंग जस्तै दुवै हात, खुट्टा थिएनन् । साथै उनी स्नायु सम्बन्धित समस्याबाट पनि पीडित थिए ।
तर उद्धवले राजका लागि एउटा यस्तो चप्पल बनाइदिए जसको सहयोगमा अहिले उ सजिलै रेलको लिक भएको बाटो काटेरै विद्यालय जान्छन् । साथै उसका लागि हातले सजिलै लेख्न सक्ने मेसिन पनि उद्धवले बनाइदिएका छन् । अहिले राज र उनको परिवार एकदम खुशी छ ।
राजले भनेका छन्, “म केहि गर्न सक्दिन होला जस्तो लागेको थियो । तर अब मेरा लागि जीवन सहज भएको छ । यो सबको श्रेय उद्धव जी लाई जान्छ ।”
उद्धवले गरेका यस्ता आविष्कारलाई एक प्रकारको जुगाडको संज्ञा दिइएकाे छ किनकी उनी कम खर्चमा नयाँ कुरा बनाउन सक्छन् ।
“मानिसहरुलाई आविष्कार गर्न प्रोत्साहन गर्न उद्धवले ठूलै योगदान दिएका छन् । किनकी यसमा आफ्नो मौलिक सोच भन्दा धेरै केहि चाहिँदैन । यसमा आफ्ना वरिपरिका समुदायको समस्या पहिल्याइन्छ र आफूसंग जे छ त्यसकै माध्यम बाट समस्या समाधान गर्न खाेजिन्छ ,” क्याम्ब्रीज विश्वविद्यालय अन्तर्गतकाे जज विजनेस स्कुलका जयदिप प्रभुले भनेका छन् ।
उनले अरू मानिसकाे अाय अार्जनमा सहयाेग गर्न एउटा केन्द्रकाे पनि स्थापना गरेका छन् । उद्धवले इन्जियरिङ विषय अध्ययन गरेका छन् तर उनी अाविस्कारका लागि सिपले मात्र नपुग्ने बताउँछन् ।
उद्धव भन्छन्के,”केहि गर्ने साेच अाफू भित्रै बाट अाउने हाे , कसैले हामीलाई यतिकै आविष्कारक बनाउन सक्दैन ।”
उनी भन्छन्,” सफलता पाउने कुनै छाेटाे बाटाे छैन, तर कुनै समस्या समाधान गर्ने पहिलाे व्यक्ति बन्दा प्राप्त हुने खुशीले मलाई प्रेरित गरिरहन्छ ।” बीबीसीकाे भिडिअाे रिपाेर्टबाट भावानुवाद ।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि बंगलादेश एक्स्पो हुने